WTM: Shirka Wasiirrada waxaa laga dhageysanayaa sida farsamada casriga ahi u caawin karto dhaqanka miyiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » WTM: Shirka Wasiirrada waxaa laga dhageysanayaa sida farsamada casriga ahi u caawin karto dhaqanka miyiga
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Tunisia War Cusub • Wararka kala duwan
Shir madaxeedka WTM
Noocyada waaweyn ee caalamiga ah sida Google iyo Mastercard waxay ka caawin kartaa beeralayda, dukaanleyaasha iyo dib u habeynta si ay kor ugu qaadaan dalxiiska miyiga, wufuuda maanta laga maqlay Suuqa Safarka Adduunka (WTM) London - dhacdada ay fikraduhu yimaadaan.
Ganacsatada iyo madaxda shirkadaha ee goobta Shir Madaxeedka Wasiirada UNWTO & WTM sidoo kale waxa uu ku booriyay wasiirada dalxiiska ee caalamka in ay la shaqeeyaan ganacsatada si ay u caawiyaan bulshooyinka reer miyiga ah.
Mawduuca shir-madaxeedkan sannadlaha ah ayaa ahaa 'Tiknoolajiyada Horumarinta Reer Miyiga', waxayna ujeeddadeedu ahayd in dhidibbada loo aaso shaqo dheeraad ah sannadka 2020, markaas oo 'horumarinta reer miyiga iyo dalxiiska' ay hal-ku-dheg u noqon doonaan Maalinta Dalxiiska Adduunka 2020 27-kii Sebtembar.
Diana Muñoz-Mendez, Senior VP, Global Tourism Partnerships at Mastercard, ayaa sheegay in shirkadda lacag-bixinta ay ka caawinayso ganacsiyada yaryar ee miyiga ah - beeraha, dukaamada iyo makhaayadaha - si ay lacag u qaataan si dijital ah halkii ay isticmaali lahaayeen lacag caddaan ah, maadaama inta badan dadka safarka ah ay hadda ku bixiyaan kaar.
Ann Don BoscoMadaxa Grow ee Google, ayaa sheegay in shirkadda weyn ee teknoolojiyadda ay 120,000 oo qof ku tababartay hoteellada Greek-ga ee miyiga ah, si ay uga faa’iideystaan ​​farsamada casriga ah, ayna isha ku hayaan inay ballaariyaan hindisaha Japan iyo Kenya.
Nidaam kale oo loogu talagalay beeralayda - markan Turkiga - ayaa lagu muujiyay Debbie Hindle, Agaasimaha Maamulka ee Afar Safar“Dalxiiska reer miyiga kaliya kuma eka dalxiisayaasha – Taste of Fethiye initiative from the Travel Foundation ayaa ku dhiirigelisay beeralayda inay soo saaraan cuntada huteelada maxaliga ah, oo ay u sheegaan dalxiisayaasha.
Daraasad kale ayaa soo bandhigtay Kaamamka Santiago, Madaxa fulinta ee Teknolojiyadda Mabrian - oo ku takhasusay falanqaynta xogta safarka.
Waxa uu sheegay in isku-xidhka magaalooyinka dhaxalka ah ee miyiga Colombia ay gacan ka geysteen wanaajinta waayo-aragnimada dadka safarka ah iyo faafinta dakhliga ka soo gala dalxiiska oo ka baxsan soo jiidashada caadiga ah iyo magaalooyinka. Gary Stewart, Agaasimaha dardargelinta ganacsiga Wayra UK, waxay iftiimisay meelaha sida Iswidhan iyo Israel inay tusaale wanaagsan u yihiin meelaha soo jiidashada maalgashadayaasha.
Axmed al-Khatib, oo ah guddoomiyaha ururka Guddiga Dalxiiska iyo Hiddaha Qaranka ee Sucuudiga, ayaa u sheegay shir-madaxeedka in Sucuudigu uu leeyahay hammi hammi ah oo uu ku horumarinayo dalxiiska – balse uu sidoo kale doonayo in uu ilaaliyo hiddaha iyo dhaqanka miyiga ee gaarka ah.
"Tusaale ahaan, martigeliyayaasha Airbnb waxay ku soo dhaweyn karaan meelaha miyiga ah ee aan weli hoteello lahayn," ayuu u sheegay wasiirrada.
"Waxaad la joogi kartaa qoys waxaadna arki kartaa sida ay wax u cunaan una labistaan."
Waxaa la asaasay shirka sanadlaha ah ee ugu weyn ee wasiirada dalxiiska, fikirka-tanka sare waxaa daadihinayay Nina Dos Santos, Tafatiraha Yurub ee CNN International.
Waxay ku casuuntay wasiirrada dalxiiska ee Yemen, Guatemala, Panama, Albania, Bolivia, Colombia, Sierra Leone iyo Portugal si ay ugala hadasho muhiimadda horumarinta miyiga si ay gacan uga geysato taageerada dalxiiska iyo dhaqaalaha qaranka.
Tusaalooyinka waxqabadka wanaagsan waxay udhaxeeyeen tignoolajiyada mobilada ee Sierra Leone, cashuur dhiirigelinta huteelada Colombia, dadaalada Wi-Fi ee Portugal, bakooradda sonkorta iyo kookaha ee Guatemala, iyo koofiyadaha rinji ee Panama.
eTN waa bah wadaag warbaahineed ee WTM London.